Guriga > safarka Europe > Halkee laga heli karaa Europe intooda badan wayn Architecture
Raadinta inaad aragto qaar ka mid ah qaab dhismeedka ugu fiican fasaxaaga soo socda? Haddii ay sidaas tahay, waxaa laga yaabaa in ay tahay meel ka wanaagsan Europe kuu. Haddii aad xiisaynayso ee Hababka naqshadda dhismaha classical ama rajeynaya in ay ka heli qaar ka mid ah ka yar-yaqaan jowharadahaaga, magaalooyinka Yurub kugu daboolay. Aynu eegno at tusaalooyin qaar ka mid ah naqshadda dhismaha weyn iyo meesha ay u dhammuna waxay wada arki:
Architecture wayn: Talyaaniga
Talyaaniga waxaa ka buuxa magaalooyinka iyo tuulooyinka yar yar halkaas oo aad ka heli lumin karaa logu dhismayaasha quruxda badan. Haddii aad ku jirtid Rome ama Florence, kasta geeska mudan sawir. Dalxiisayaasha raadinaya magaalooyinka yar yar qurux badan, Vicenza waa tan saxda saxda ah. Waa dhow haddii aad tahay qaadashada tareen ama ka Venice, kaas oo sidoo kale waa booqo. Iyadoo Vincenza waxaa caan ku ay style naqshadaha Renaissance uuraysan maanka Andrea Palladio, naqshadaha uguurtay inta badan waa Gothic, faahfaahin, iyo qurux.
Waxaa ka mid ah magaalooyinka kale ee dalka Talyaaniga aad ka maqnaan karaa, Rome iyo Florence ayaa sidoo kale u istaagaan soo baxay sida ugu cadcad. Rome inta badan waa buuxa ee dalka durkiya qof kasta waa in ay arkaan mar uu nool yahay. Colosseum The, St. Peter Basilica ee, karnoo, iyo ishii Trevi dhammaantood waxay mudan yihiin booqashada. Dhanka kale, Florence ayaa isku dar ah ee kala duwan, gaar ahaan Giriigga ee hore iyo naqshadaha Roman, Gothic iyo Renaissance.
Architecture wayn: Faransiiska
France waa guriga in a magaalo yar oo la kala duwan oo Hababka in ka tagi doono wax kasta oo neef lover wayn Architecture. Waxaa ka mid ah murashaxiinta ra'iisul booqasho, Strasbourg, Bordeaux, iyo Paris tahay bixiyaan ugu.
Waxaa jira badan oo GEMS naqshadda in laga helo Jarmalka. Si kastaba ha ahaatee, laba ka mid ah kuwa ugu xoog leh yihiin Berlin iyo Rothenburg. Architecture inta badan aado gacanta ee gacanta taariikhda, oo aad ka arki kartaa xiriir this si cad in Berlin. Magaalada ayaa mar loo qaybsan, iyo in ay si cad u arki karo in meelaha qaar ka mid ah. Taasi waxa ay ka dhigaysaa meel aad u weyn in waayo-aragnimo qaybaha kala duwan ee naqshadaha iyo quusto qoto dheer galay taariikhi ah saamayn of farshaxanka.
Europe oo qiimihiisu yahay Safraan, oo waxaa jira meelo badan oo qurux badan oo kale oo ay tahay in aad ku dadaalaan in ay booqdaan. naqshadaha wayn waa badan yahay England, Belgium, Awstariya, Iswiidhan, iyo Nederlaan sidoo.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmagnificent-architecture%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Dhismaha	safarka Faransiiska	safarro badan	safar ahaan